Taariikhda My Butros » Maxaa Ha Your Xayawaanka idinku saabsan
Last updated: May. 21 2020 | 3 min akhri
Like ama ha, sida aan u maraan nolosha sheegay in wax badan oo ku saabsan wejiyada kala duwan ee qofnimadeena. Tusaale ahaan, qof la dhaafin ee goobta shaqada sida caadiga ah waxay leeyihiin lahaa aragti ah wax yar ka adag dhinaca nolosha la dhaxleen u wanaagsanaanta. Dhinaca kale, waxaad ku dhawaad ​​noqon kartaa qaarkood in workmate ka yimid xafiiska la yanyada on Qamiiskiisu ka gacma dheere malaha waa kuma qofka aad u taxaddar. Dabcan, tani waa in aanay noqon doonaa mid ka mid ah qofka qofnimadiisa guud. Si kastaba ha ahaatee, ay tahay calaamad muujinaysa ammaan ah sida uu qofka guud ahaan lahayd nolosha. In dheeraad of this, dadka dooran xoolaha kala duwan sida xayawaan guri caadi ahaan la wadaagi lahaa sifooyin gaar ah.
Warka fiicani waxa weeye in milkiilayaasha eey tahay mid aad u danaynaya, diiran oo xigmad leh oo daacad ah. Ka dib dhan, eeyaha u baahan tahay in la daryeelo. Haddii wehelkaaga waa qof eey, waxaa jira fursad aad u sarreeya in ay u muuqdaan in ay noqon more kalgacal in xiriirka. Dog ku caashaqay sidoo kale noqon lahayd xil badan oo kaliya ay sabab u tahay xaqiiqada ah in eeyaha ka dib dhan u baahan badan soo jiidanaya sidoo. Mid ka mid ah wax wanaagsan oo ku saabsan eyga waa xaqiiqda ah in ugu badan, ay yihiin kuwa ugu kalsoonaan karo oo daacad ah saamigii.
Cats ayaa la ogaaday in ay aad u durkaan dadka ku xeeran. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale dhul aad u xasaasi ah oo dhab jamasho Jacayl. Milkiilayaasha Cat sawir sifooyinka la mid ah. Waxa ay heer sare ah ku lifaaqan xayawaannada ay oo run ahaantii jecel yahay xarunta of dareenka (inkastoo si aanay taasi u muujiyaan). Furaha shukaansi milkiilaha bisad waa adigoo u muujinaya tiro la mid ah dareenka oo ay xasaasi ku tahay lab-.
Dabcan, waxaa jira doodo badan oo ku saabsan in ay tahay run ahaantii xaq u leeyahay inuu sii shimbir sida xayawaanka guri. Inkastoo dadka qaarkood heli gaararkiisa ah, iyadoo la dhisayo baqashada shimbir in ay beerta iyo siinta shimbiraha ay xor u yahay inuu dhex mushaaxaan ku saabsan sida ay si dabiici ah u sameeyaan. Milkiilayaasha Bird ku nool noloshooda maalin maalmaha ka mid waqti iyo sida oo kale, waxaa sida caadiga ah in laga helo goobaha aan hogaansamaan. Waxay sidoo kale waxa ay noqon ka badan hal abuur iyo adventurous.
Fish sida xayawaanka guriga waa sida u dhow waxyaabaha aan xejisto sida xayawaanka waxay noqon kartaa. Sure, waana wax weyn inaan daawado dabaasha kalluunka baaquli kalluunka ama taangiga. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid aanu si dhab ah ma heli badan laba-jid dhexgalka kalluun. Dadka ku raaxaystaan ​​kalluun hayo sida xayawaanka guriga ayaa inta badan ka aamusan badan ugu. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale ay wanaagsan yihiin marka loo eego dadka kale iyo guud ahaan aan ka welwelsan tahay caadooyinka bulshada caadiga ah.
Bakaylaha, hamsters iyo khansiir
Xayawaanka Kuwan waxa sida caadiga ah la fadilay kuwii carruurta yaryar iyo dhallinyarada. Dabcan, sidoo kale waxaa jira tiro ka mid ah dadka waaweyn ee sii yar, xayawaan oo feeri sida xayawaanka guriga. Kuwaas waxaa guud ahaan waa dad samayn ku raaxaystaan ​​xiriir laba geesood ah laakiin waxa ay doonayaan inay tijaabiso dhulka ugu horeysay la eego xayawaankaaga. Sidoo kale waxay ka mid yihiin diiran oo kalgacal u janjeeraan dhinaca mas'uuliyadda. Xayawaanka ku caashaqay Kuwani waa madadaalo jecel oo kaftan ah.
Ka waran kuwa aan qabtid xayawaan guriga? Ama xitaa kuwa aan qirayaa jacaylka kasta xoolaha? Marka tani, waxaa hubaal ah ma aha macnaheedu in ay qabow yihiin, ama ku jirin suuqa ugu jecel xiriirka. Xaaladaha ka ciyaaraan qayb muhiim ah in la go'aaminayo haddii qof ahaan lahaa wax badan ka badan kuwa kale in xayawaanka la leedahay. Milkiilayaasha Non-xayawaanka ayaa sidoo kale waxa uu noqon karaa mid aad u daacad, masuul ka ah oo daryeel!
In si kooban u dhigo, waxay u badan tahay in aad la kulanto qofka leh xayawaanka kii aan waxba qabin oo ka mid ah tayada kor lagu soo sheegay a. Tani ma jirto liiska kama dambaysta ah ee dabeecadda qofka oo ku xidhan nooca xayawaanka ah in mid ka mid jecel yahay. Si kastaba ha ahaatee, cilmi baaris ku filan ayaa loo sameeyay si ay u muujiyaan in ay jirto arrin guud oo ku saabsan sifooyinka iyo sifooyinka kasta lover xoolaha u badan tahay inaad hantidaan. Marka laga xayawaanka in lagu hayaa guriga,, xiriir weli wuxuu u dhigmaa labo qaybood loo siman yahay oo u dhexeeya laba qof oo ka go'an.